Iyo Goridhe Scenery kubva kuPierre Loti Hill Inotakudza Munhu wese | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulKuona kweGoridhe Nyanga kubva kuPierre Loti Hill Enchants Munhu wese
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY, TELPHER
Kuwona kweHalic kubva kuPierre Hill kunozivikanwa nemunhu wese
Paunosvika kune aya madhiri, ino ndiyo nzvimbo yakanakisa paunogona kutarisa iyo panorama yakakurumbira yeGoridhe Horn; Kofi, anonzi mushure memunyori anozivikanwa wechiFrench Pierre Loti, anosvika. Ichokwadi zita raPierre Loti, anogara muIstanbul kwenguva refu uye ari wechokwadi Istanbul mudiwa, ndi "Julien Viaud". Nhoroondo Kofi ndiyo inzvimbo yakanakira iyo iyo yakasarudzika inogona kuona. Izvo zvakare zvinokwanisika kukwira chikomo nemota yemagetsi.
nezve pierre loti gomo
Zvinonzi Pierre Loti, akazviona senyika yechipiri, akauya kune iyi kofi inozivikanwa se "Rabia Women's Kofi" ndokunyora chinyorwa chake "Aziyade" vachipokana neGoridhe. Iyi nharaunda, iyo yekutanga "yeTurkey nharaunda" yakadzoserwa uye ichiramba ichirarama nhasi, ine nzvimbo dzinoshanda seyekushanyira nzvimbo. Dunhu iri rinodaidzwa saEbria Çelebi's Travel Book se "Idris M nyumba Promenade".
Pierre Loti, inova nzvimbo inogara ichienda kune vese vatorwa uye vafambi vanouya kuIstanbul muzana ramakore re19, ine zvivakwa zvakawanda zvezvakaitika kare zvakakomberedza. Mumwe wadzo ihuni Kaşgari Tekkesi ine miviri yakanyorwa, yakanyorwa muna 1813. Zvekare, pamusuwo wechivako, chivakwa chine guva jena rakakomberedzwa rakanyorwa muPersia ndi Çolak Hasan Tekkesi. Iyo yakavakirwa nhoroondo mumutsara weTekke Chikoro cheMishonga. Guva reMevlevi rakanzi "İskender Dede", uyo akafa muna 1589, iri pamberi chaipo peMekteb uye mukati menzvimbo inzvimbo, iyo yakavakwa naİdris-i Bitlisi, anove zvekare munyori wekare weOttoman. Imwe yematsime matatu kumberi kwe İskender Dede ndiyo inozivikanwa Dileki (kana chinangwa) Zvakanaka. MuEvhenia Çelebi Seyahatname maererano neiyi tsime; Anonyora kuti "avo vanotarisa tsime vanoona zvido zvavo mumatsime avo". Pamusoro peguva pane makuva aSaray “Atçıbaşı (Mirahur-Tuğ General) Ali Ağa nemhuri yake. Uye zvakare, "Sarnıç", iyo inofungidzirwa kuti yakavakwa munguva yeByzantine uye yakashandiswa munguva yeOttoman, inochengetedza kuvepo kwayo pakati penzvimbo.
Ungasvika sei kuPierre Loti Hill?
Kana iwe uchienda nemotokari yako; Kune nzira yekuseri kuPerere Loti. Nenzira iyi, unogona kukwira chikomo ndokusiya mota yako ipapo, uchisiya paki yemotokari…
Vaya vanouya vasina mota kubva kuAnatolian Side vanogona nyore kupinda pa Üsküdar - Eyüp feri. Iwe unogona kukwira chikomo nekutora kabhodhi mota kubva pachiteshi chechikepe.
Kana iwe uri kuuya nebhazi, iwe unofanirwa kuburukira kuEyüp Sultan mira kuti usvike kuPierre Loti uye tora chingoro mota kubva ipapo.
Unogona kukwira kabheji mota kuenda kuPierre Loti Hill ane akbil ...
Pierre Loti tambo yemotokari fares
Kuti usvike kuPierre Loti Hill nemota yemagetsi, unotora chingwe yemoto weIstanbul Metropolitan Municipality. Kune izvi, iwe unogona kupfuura nekuverenga yako 'Istanbul Kadhi' seyakajairwa edition. Kune imwe neimwe vhezheni, vanowanzo kadhi vane vanobhadhara 2,60. Nepo vadzidzisi vachibhadhara 1,85, mitengo yematikiti evadzidzi ndeye 1,25.
Pierre Loti Kushandisa Mifananidzo Maonero Akasiyana-siyana
Olympos Teleferik inofadza vashanyi vayo nemafungiro ayo akanaka (Vhidhiyo)
Pierre Loti uye Cable Car (Photo Gallery - Video)
Eyüp - Pierre Loti - Miniatürk Ropeway System Project Pre-sarudzo…
Nzira yekuvaka inotanga paEyup-Pierre Loti-Miniaturk motokari yemotokari
Motokari yemagetsi pakati peEyup naPaul Loti ichaenderera ku Miniaturk
Pierre Loti-Miniaturk kambani yemotokari yemhando yekugadzira hurongwa iripo
Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Mutambo weKana Car Facility
Tender Chiziviso: Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Cable Car System
Istanbul, Halic Metro Pass Bridge Pamusana peNyika Dzakakurumbira
Zvitsva zviviri zvitsva
Dhijitari Yekurima Soko Inosimudzira Wese Kuti Kugadzirwa
Ankara inoona 1TL neKeçiören cable motokari
Kufarira skiing nechekuona muBitlis
Unique Alpine Landscape ne Ski Lifts mu Oslo Winter Park
Railway Artists Vanoremerwa
Vagari veIstanbul vanonakidzwa nemotokari yemotokari nemaonero echando